Sanad Guurada TPLF Iyo Socdaalkii Madaxwaynaha DDSI Ee Dhul Taariikheedka Halgakii Wayaanaha. - Cakaara News
Sanad Guurada TPLF Iyo Socdaalkii Madaxwaynaha DDSI Ee Dhul Taariikheedka Halgakii Wayaanaha.
Saxafti-Tigrey(CN) Isniin.Feb.16.2015, sida aad wararkayagii hore kala socotay CakaraaNews maalintii shalay oo dhan waxaa socdaal booqasho ah dhulkii halganka TPLF iyo EPRDF kumarayay wafti sare oo ay kamid ahaayeen madaxa tababarada EPRDF ahna gudiga bordhiga taageerada gaarka ah ee deegaanada mudane Addisu Legase, Madxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, L.General Abraham W/mariam, M.General Mahari Zewde, madaxwayne kuxigeenka DDSI mudane Cabdixakiim Cigaal iyo madax kale.
Waftiga ayaa niskii hore ee shalay soo maray goobihii dagaalkii labaad ee Wayaanaha ee lagu jabiyay ciidamadii Dergiga. Goobahaas oo ay kamid ahaayeen Guna Wuha oo ah meelihii aadka loogu jabiyay halkaas oo uu waftiga uga warbixinayay dhacdooyinkii halgankii EPRDF R/wasaare kuxigeenkii hore mudane Adhisu Legesse.
Madaxdan ayaa duhurnimadii lagu soo dhaweeyay magaalada Qabo-Raya ee deegaanka Axmaarada halkaas oo si heer sare ah ay bulshada qaybaheda kala duwan waftiga ugu soo dhaweeyeen.
Hadaba waxay waftigu galinkii danbe kasoo baxeen deegaankaasi Axmaarada iyagoo soo gaadhay dhulkii halgankii Wayaanaha koobaad (First Woyana Movement) ee ay dagaaladii cuslaa ee Haileselase lala galay.
Qaar kamida deegaanadii halgankii khadhaadhaa ee ay waftigu shalay soo mareen ayaa waxaa kamid ahaa deegaanka Garabagaw ee qabalaha Saxafti ee deegaankaasi Tigrey. Fisum W/giyorgis wuxuu kamid yahay dadkii shacabka ahaa ee halgankaasi ku naafoobay kaasoo gacantiisii kuwaayay sida sawirkaba ka muuqata islamarkaana si fahan buuxa leh uga waramay madaxdiii qaabkii ay dgaaladu u bilaabmeen taniyo bilowgii halganka ee 1943 G.C oo ahaa halgankii wayaanaha koobaad.
Waftiga oo si cilmiyaysan oo wax ku ool leh uga soo bogtay dhul badan oo taariikhi ah gaar ahaan kuwii halgankii TPLF iyo EPRDF islamarkaana shacabka deegaankaasi xogo badan iyo macluumaad taariikhi ah kahelay ayaa xalay fiidnimadii soo gaadhay xarunta deegaanka Tigrey ee caasimada Maqale halkaas oo ay madax badan isugu timid iyadoo ay maanta socdeen barnaamijyo badan oo kamida sanadguurada 40 aad ee TPLF.
Iyadoo ay wali socdaan barnaamijyo kala duwan oo qaybo ka ah sanadguurada 40 aad ayaa lasoo gabagabayn doonaa maalinta arbacada ah ee fooda inagusoo haysa taasoo ay dhici doonto munaasibada wayn ee sanadguuradan 40aad.